Tena ilaina ve ny mampitovy zaza kambana?
Zaza idiran’ny rivotra ...Ireo tsara ho fantatra rehetra
Diso ny fiheverana fany akanjo hanaovana, na ny toetry ny andro no mety mahatonga ny zaza hidiran'ny rivotra. Tsy dia izay loatra fa ireo fihetsika ataontsika aminy na aretina no mety ahazoany izany.
Marina fa mahafinaritra ny maso foana ny mahita ireo zaza kambana manao fianjaika mitovy, indrindra rehefa mbola kely izy ireo ary efa mahazatra an’ireo Ray aman-dreny sasany ny manao izany.
Fantaro anefa fa tsy voatery hatao an’izany ny zaza na dia kambana aza. Misy ny antony tsy mampety izay fiheverana izay.
Na ny fitafy na ny kiraro, na ny volo na ny fisafidianana ny zavatra atao dia saika atao mitovy avokoa satria amintsika dia mahafatifaty foana ny mahita an’ilay zaza kambana mitovy ary pratika kokoa ny manao izany. Fantaro anefa fa mety hisy fiantraikany any amin’ny hoavin’ilay zaza ny fanaovana izany.
Fanazavan’ny reny iray mikasika izany
Na dia kambana aza ny zaza dia tena zava-dehibe ny tsy fampitoviana ny zavatra hanaovany na ny zavatra hataony satria tena manova zavatra be ny fanaovana izany na eo amin’ny fifandraisany manokana na eo amin’ny fahaleovan-tenany manokana. Aleo ilay zaza ihany hoy izy no misafidy ny zavatra tiany hanaovana raha efa afaka misafidy izy. Zava-dehibe ho an’ny ho avin’ilay zaza ny fanaovana izany ary fanajana ny safidiny ihany koa.
Hevitry ny manam-pahaizana manokana mikasika izany
Efa mandeha ho azy ho an’ireo ray aman-dreny sasany izay manana zaza kambana no mampitovy ny zavatra rehetra ho an’ilay zaza na fony izy mbola kely aza. Saingy rehefa eny amin’ny fiainana andavan’andro dia aleo zavatra samihafa foana no hampanaovina ny zaza na dia kambana aza izy mba hiavahany kely sy mba hahafantarany fa tokana eto an-tany izy na dia kambana aza.
Ny mety ho vokatr’izay eo amin’ilay zaza
Na kambana aza ny zaza dia manana zo hanana ny mombamomba azy manokana izy. Aza am-panaovina zavatra mitovy izy na eo amin’ny resaka fitafy na eo amin’ny resaka fianarana na ny zavatra hafa na dia tena manamora ny lamina rehetra manodidina azy aza izany. Ny antony dia mety ho sarotra ho an’ilay zaza manokana ny hahaleo tena samy irery rehefa any aoriana any. Mety hisy ihany koa ny mety ho fampitahana eo amin’izy roa izay mety hiteraka fanafintohinana sy halaelo eo amin’ny iray amin’izy ireo ary mety hitarika tsy fahatokisan-tena eo aminy satria izany. Na kambana azy mantsy izy roa dia samy manana ny toetrany izay hiavahany avy. Na samy manana zavatra mitovy aza ilay zaza dia ezaho hatao samihafa foana ihany na ny lokon’ilay zavatra fotsiny aza.